नेपाल न भारतको आज्ञाकारी न चौकीदार आपूर्तिकर्ता हो ?भारतीय नेत्रृ अलका लाम्बाले मागिन नेपालीसँग माफि
प्रकासित मिति : २ चैत्र २०७५, शनिबार प्रकासित समय : १५:००
जेन्सी । यो वाक्यमा लुकेको अभिमान र घमण्डलाई हेर्नूस्चौ-कीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सक्छौँ। भारतको आम आदमी पार्टीकी विधायक अलका लाम्बाको यो ट्वीटमा समावेश मगाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा अलि ध्यान दिनूस् त। आवाज आउँछ हामी मालिक हौँ, हामीसँग अथाह पैसा र शक्ति छ, हामी जहाँबाट पनि जे मगाउन सक्छौँ।
नेपालबाट चौकीदारबाहेक हामी अरू के नै मगाउन सक्छौँ रु हुन त साँझ भट्ठीमा रक्सीका लागि कुर्दै गरेका एउटा जँड्याहाले पनि यस्तो कुरा गर्छ, रक्सी त म जति पनि मगाउन सक्छु। मलाई के को कमी छ र भारतीय नेत्रृको नेपालीप्रति अपमानजनक ट्विट, आक्रोशपछि माफ मागिन्
लाम्बाको भनाइ यस्तो थियो कि मानौँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसरी भनेका हुन् (सरसफाइका लागि छिटो भारतीयहरूलाई मगाऊँ, न्यूयोर्क निकै फोहोर भएको छ। तर नेपाललाई आफ्नो बिर्ताजस्तै ठान्ने अलका लाम्बा एक्लै होइनन्। उनले आफ्नो गलती महसुस गरी ट्वीट त मेटाइन्, तर त्यसले त्यो मानसिकता मेटिँदैन जुन मानसिकताले नेपाललाई आफ्नो आज्ञाकारी ठान्छ।
नेपालीहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् कि नेपाललाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्नेहरू भारतमा प्रशस्त छन्। गत महिना काठमाडौ‌बाट दिल्ली जाँदै गरेको एयर इन्डियाको फ्लाइटमा मसँगै बसेका एक भारतीय यात्रीले जब बियर मागे तब एक परिचारिकाले मुस्कुराउँदै भनिन्, सर, यो आन्तरिक उडान हो, यसमा हामी बियर दिँदैनौँ। मैले ती कर्मचारीलाई सोध्न चाहेको थिएँ कि नेपालका लागि हुने उडानहरू कहिलेदेखि आन्तरिक उडान भएरु कहिलेदेखि तपाईँहरूले नेपाललाई भारतमा समेटिसक्नुभयो रु
नेपालीहरूलाई साँच्चै लाग्छ कि भारत ठूलो छ। त्यसैकारणले भारतीयहरूको अहङ्कार पनि ठूलै छ। भारतीयहरूलाई कैयौँपटक यो कुरा महसुस हुँदैन कि उनीहरूले नेपालबारे जे भनिरहेका हुन्छन् ती कुरा नेपालीले मन पराइरहेका हुँदैनन्। तर भारतीयहरूको प्रश्न हुने गर्छ हामी त नेपाललाई आफ्नै ठान्छौँ तर पनि के समस्या छ?
काठमाडौ‌ पुग्ने बित्तिकै मैले पनि उत्तर भारतीय शैलीमा त्यहाँका साथीहरूलाई भनेँ, नेपाल आफ्नो घरजस्तै लाग्छ। कुरा खस्न नपाउँदै एक नेपाली साथीले भने, तपाईँका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यस्तै भन्छन्। अनि मैले सम्झेँ प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली नागरिकले सडकछेउबाट हात मिलाउँदै उनको स्वागत गरेका थिए। तर तिनै नेपालीहरू अहिले मोदीको नाम आउनासाथ किन अनेकौँ प्रश्न गर्न थाल्छ।
लाम्बाले भनेका जस्ता वाक्यबाट नेपालीहरूलाई लाग्छ कि भारतीयहरूले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार्दैनन्, बरु नेपाललाई आफ्नो छत्रछायामा राख्न चाहन्छन्। नेपालीहरूलाई भारतको यस्तो माया कहिल्यै मन पर्दैन, बरु उनीहरूलाई त्यसमा सांस्कृतिक विस्तारवादुको गन्ध आउँछ। तीन महिनासम्म काठमाडौ‌मा बसेर काम गर्दा र कैयौँ शहर अनि गाउँहरू डुल्ने क्रममा मैले कैयौँपटक यस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो।
बसमा, पसलमा, होटलमा, सडकमा कुराकानी गरिरहेका कैयौँले पटक पटक मलाई एउटै प्रश्न गरे – मोदीले हामीलाई रगतको आँसु किन रुवाएरु नेपालका मानिसहरू खासगरी पहाडी क्षेत्रमा बस्नेहरू सन् २०१५ का ती दिनलाई बिर्सेका छैनन् जतिबेला मोदी सरकारले नेपालमा अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी गरेका थिए र मानिसहरूले पेट्रोल, डिजल, ग्यासजस्ता वस्तुका लागि तड्पिरहेका थिए।
कैयौँ नेपालीहरू आफ्ना कार र मोटरसाइकललाई घरमै छाडेर साइकल किन्न बाध्य हुनुपरेको थियो। तर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिएको त्यो पहिलो पटक थिएन, त्यसअघि राजीव गान्धीले पनि गरेका थिए। नेपालको मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङ्गबाट विद्यार्थीहरूलाई लिएर पोखरा पुगेका एक प्राध्यापकले मलाई सोधे – नाकाबन्दी गरेर मोदीले हामीलाई जानाजान चीनतर्फ धकेलिरहेका हुन्रु र, मैले के जवाफ दिन सक्थेँ ? बीबीसी नेपालीबाट साभार